खुदाकाे सट्टा जुदा लेखेकाे बजेटलाई समाजवाद उन्मुख भन्ने पाखण्ड नगराैँ - हिमाल दैनिक
खुदाकाे सट्टा जुदा लेखेकाे बजेटलाई समाजवाद उन्मुख भन्ने पाखण्ड नगराैँ
२० जेष्ठ २०७६, सोमबार १७:०४
सदा झैं यसरी बजेट प्रस्तुत हुँदा परम्पराका रुपमा पक्ष र विपक्षमा बोल्ने थुप्रा कुराहरु आइसके।
म स्वयं विधिध व्यवस्था अन्तरगत यस सभामा लामो समयदेखि उपस्थित छु। अरु कुरामा छोडे पनि बजेटमा हरेक वर्ष मैले केही न केही बोल्ने गरेको छु, उहिल्यै ४७ सालको संविधानदेखि नै।
अब बजेटका खुद्रा कुराहरुको बारेमा केही पनि भन्नु छैन। एउटा आधारभूत कुरा भन्नु छ त्यो मैले पहिलो पटक पनि भनेको होइन। नेकपाको सरकारको पालामा मात्र पनि भनेको होइन, पहिले पनि भन्ने गरेको थिएँ।
उर्दुमा एउटा कथन छः रुक्मेके फरक से खुदा जुदा हो जाता है। उर्दु भाषामा माथि यसको चन्द्रविन्दु हाल्नु भयो भने त्यहि शब्दले फरक अर्थ खुदा लाग्छ, चन्द्रविन्दु हटाइदिनु भयो भने त्यहि शब्दको अर्थ जुदा लाग्दछ। एउटाको अर्थ गड र अर्कोको सेपेरेट।
यसमा थुप्रा कुरा छन् जसलाई म ठिक भन्न सक्छु। थुप्रा कुरा छन् जसलाई म बेठिक भन्न सक्दछु। त्यता म जान्न सम्बन्धीत मित्रले भनिसक्नु भएको छ।
यसमा एउटा कुरा छ, मैले वर्षौँदेखि भन्दै आएको सबै कुरा टुंगिन्छ। एउटै कुरामा केन्द्रीत भएर आजको यो बहुमूल्य समय लिन्छु।
हामीले सुविधायुक्त गाउँ बनाउने हो। शहरलाई कति चाहियो? गाडी पुगेन कि, कलेज पुगेन कि, स्कूल पुगेन कि अस्पताल पुगने? काठमाडौंमा जोड्नुहोस् त प्रतिव्यक्ति कति छ?https://himaldainik.com/2019/06/03/63964/
एकठाउँमा के भनिएको छ भने, आधुनिक सभ्यताको मानक नै सुविधायुक्त शहर भएको तथा मुलुकको विकासको स्वरुप शहरी पूर्वाधारबाटै प्रतिविम्बित हुने यथार्थलाई ध्यान दिँदै शहरी विकासको कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छु (पृष्ठ ४७)।
म यो सरकारलाई भन्न चाहन्छु, यस पंक्तिमा एउटा शब्द फेरिदिने हो भने मलाई यो बजेट पूर्णतय स्वीकार छ। एउटा शब्द खुदालाई जुदा बनाउने शब्द त्यो के हो भने, आधुनिक सभ्यताको मानक सुविधायुक्त शहर हो त?
काठमाडौंलाई शहरको सट्टा कहर बनाएर पनि चित्त बुझेन? कहर भन्छन् उर्दुमा बर्वादीलाई।
सुन्नुहोस् मैले भन्न खोजेको कुरा, यसलाई तपाई ठाडै लेख्न सक्नु हुन्छ आधुनिक सभ्यताको मानक नै सुविधायुक्त गाउँ बनाएर। गाउँलाई सुविधायुक्त बनाउन सकिदैन? गाउँलाई सुविधायुक्त बनाउनु आजको नेपालको चुनौति हो कि होइन? एउटा सानो शब्द छ, PURA अर्थात Providing urban amenities to rural areas. एउटा अर्धपागल जस्ता मान्छे थिए, लुगाफाटो पनि त्यस्तै थियो, अब्दुलकलाम आजाद। भारतका राष्ट्रपतिले यो शब्द बनाएका थिए। तेस्रो विश्वलाई चाहिएको कुरा के हो भने (PURA) पूरा। यत्ति शब्द शहरलाई गाउँ गरिदिनुहोस् त। मेरो विन्ती छ, प्रार्थना छ। सारा बजेटको रुपरेखा दिशा बदलिन्छ।
आज गाउँबाट बजार, बजारबाट झन ठूलो बजार, झन ठूलो बजारबाट शहर, त्यसपछि फोहोर काठमाडौं, त्यसपछि विदेश, त्यसपछि अमेरिका, कहाँ हुन्छ अष्ट्रेलिया भएको छ आजभोली। यहि हो नेपालको नियती? यहि गर्न हामीले आजभन्दा ५०/६० वर्षअघिदेखि देश बनाउने कसम खाएको? यत्ति शब्द बदलिदिए पुग्छ अरु मलाई केही पनि चाहिँदैन।
हामीले सुविधायुक्त गाउँ बनाउने हो। शहरलाई कति चाहियो? गाडी पुगेन कि, कलेज पुगेन कि, स्कूल पुगेन कि अस्पताल पुगने? काठमाडौंमा जोड्नुहोस् त प्रतिव्यक्ति कति छ?
अर्को मेरो प्रश्न बडो विकल्प प्रश्न छ। सभामुख महोदय, विकल्प र विकट यो शब्द सभ्यता भनेको के हो? यो आधुनिक सभ्यता भनेको के हो? सभ्यताको परिभाषा के हो? मैले पनि सभ्यताको परिभाषामा काफी मनन् चिन्तन गरेको छु। स्थुल परिभाषामा मान्ने हो भने सभ्यता भन्ने परिभाषा बुझ्नलाई यहि प्रतिनिधि सभामा सहभागी हुनेको पुच्छरबाट बुझ्न सकिन्छ। सभ्य भनेको त्यो हो जो सभामा बस्न लायक छ। त्यत्ति हो। सभा चलाउने व्यक्तिलाई सभामुख भनिन्छ।
हाम्रा आचरण हेर्दाखेरि, विगत ५÷१० वर्षका हाम्रा क्रियाकलाप हेर्दाखेरि वरु हामीले आफूलाई प्रश्न गर्नु परेको छ कि हामी सभ्य मानिस हौँ? तोडफोड, झैझगडा, भ्रष्टाचारमा हामी डुबेका छौँ। होइन भने गाउँको त्यो साधारण मान्छेमा के कमि छ र उ सभ्य भएन? उ छिमेकीप्रति दयालु छैन? एक अर्काको दुःख दर्दमा पग्लेको छैन? माथिल्लो तल्लामा बस्ने, तल्लो तलालाई नचिन्ने, तल्लो तलामा मान्छे मलामी जाँदा हाँसेर भोज खाएर बस्ने यो चाँहि सभ्य हो? म आधारभूत कुरा भन्दैछु।
विकासको जुन प्रचलित मोडल छ, विकास सम्बन्धी जुन आजको धारणा छ, म विनम्रता पूर्वक भन्दैछु, सभामुख महोदय, यस बजेटका प्रायोजकले बुझ्नु पर्यो यो धारणा नै आधारभूत रुपमा गलत छ। यो असभ्य छ, बर्बर छ र पासविक छ।
हिँजो सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकले अमेरिकाले विश्वमा ल्याएको नीतिकोबारेमा हल्का संकेत गर्नु भएको थियो। हामी यति पतन भइसकेका छौं कि हामी त्यसकाबारेमा कुरा गर्न पनि तयार छैनौँ।
यस बर्बर सभ्यताका विरुद्धमा हामीले कतिपय प्रगतिशील र जनमुखी कदम यस बजेटमा ल्याउने कोशिश गरेका छौँ। यसका लागि अनेक मित्रले खासगरी सत्तापक्षले अर्थमन्त्रीलाई बधाई पनि दिए।
यसका बारेमा अर्थमन्त्रीलाई एउटामात्रै कुरा भन्न चाहन्छु, कि एउटा विशाल खाल्डो दुई फड्कोमा पार गरिँदैन। एउटा खाल्डोलाई दुई फड्कोमा पार गर्ने त्यहि खाल्डोमा भासिन्छ। त्यसैले मैले पहिल्यै नै भनेको थिएँ, कि विचार स्पष्ट गर्नुहोस्। आफ्नो विचार स्पष्ट गर्नुहोस्, आफू सम्बद्ध रहेएको पार्टीको विचार स्पष्ट गराउनुहोस् र आफ्ना नेताको विचार स्पष्ट गराउनुहोस्।
विचार के हो? के रे? कति आयु छ रे वर्तमान प्रधानमन्त्रीको? प्रधानमन्त्रीका अनुसार ठट्यौला हिसाबले पाँच दिन, अर्का आकांक्षीका अनुसार १५ महिना, अर्का आकांक्षीका अनुसार पाँच वर्ष।
यस देशमा नीतिकाबारे छलफलै हुँदैन। नेताका बारेमा मात्रै छलफल हुन्छ। नेता कहिले विरामी पर्यो, कहिले खकार्यो, कहिले प्रधानमन्त्री बन्यो, कतिदिन प्रधानमन्त्री बन्छ। कति प्रधानमन्त्री मात्रै हेर्ने? अरु दुई चारवटा हेरौँला।
मुख्य कुरा यस देशलाई चाहिएको तथाकथित समाजवादी नीति भनेको के हो? म यसका लेखक, प्रस्तावकलाई विन्ती गर्न चाहन्छु, या त शहरका ठाउँमा गाउँ लेख्नुहोस् या समाजवाद उन्मुख लेख्ने पाखण्ड नगर्नुहोस्।
हामी जता गएपनि समाजवादका तर्फ गइरहेका छैनौँ। समाजवाद भनेको महंगो सलादले माथिबाट छरेको टपिङ गरेजस्तो होइन। टपिङ त हुँदै होइन। समाजवाद भनेको मूलतः अर्कै दृष्टिकोण हो। जीवनका प्रति अर्कै दृष्टिकोण, सबै मनुष्य मनुष्य हुन भन्ने मान्यता।
मैले कुनै मौलिक कुरा गरेको छैन। अघि भारतका राष्ट्रपतिको कुरा गरेँ। मैले आफूले समाजवाद सिकेको आफूलाई समाजवादी भन्ने दुइजना मान्छेबाट हो। एउटा बी.पी. कोइरालाबाट अर्को माओ त्से तुङबाट। यी विल्कुल अलग धारका देखिन्छन्। मैले गान्धीको नाउँ किन लिन्न भने, गान्धीले आफूलाई समाजवादी कहिल्यै पनि भनेनन्। यी दुई पुरुषले आफूलाई समाजवादी भनेका छन्।
बी.पी. कोइरालाका योजनाकाबारे म ढुक्क छु, हामीलाई धेरै थाहा छैन। बी.पी.का विचारमा कतिपय अन्तरविरोध थिए तर, आखिरी वर्षमा उहाँले बारम्बार भन्नु भएको थियो कि विकास भनेको एक मानवीय प्रक्रिया हो। यहाँ मानविय प्रक्रियाका कुरा छन्? रोजगार दिने कुरा छ, त्यसका लागि म बधाई दिन चाहन्छु। यहाँ किसानलाई सहुलियत दिने कुरा पनि छ। यहाँ साक्षर बनाउने कुरा पनि छ। यहाँ स्वास्थ्यलाई के गर्ने भन्ने कुरा पनि छ।
तर, मुलकुरो के छैन? यो अर्थशास्त्रले गर्ने कुरा हो? अर्थमन्त्रीले गर्ने कुरा हो? बजेटले गर्ने कुरा हो? स्कूलमा जुन शिक्षक जाँदै जाँदैनन्, गए हाजिर गर्छन् र आफ्ना बच्चालाई अन्त कतै टवींकल टवींकल लिटिल स्टारमा त्यो यस बजेटले दूर गर्न सक्दछ? स्वास्थ्य कर्मचारीलाई तपाइले हाँजिर गराउन सक्नु हुन्छ? कृषि अनुदान जुन विचमा विचौलियाले खान्छन् त्यसको जवाफ तपाइसँग छ?
त्यसैले विनम्रतापूर्वक अर्थमन्त्रीलाई सभामुखका मार्फत भन्न चाहन्छु, यो काम अर्थमन्त्रीको बसमा छैन। नयाँ चिन्तन ल्याउनुहोस्, समाजवाद भनेको नयाँ सभ्यता हो, दुई चार हजार रुपैयाँ बढाउने र घटाउने होइन।
त्यसैले दुइटा अनुरोध छ, या त यस पुस्तकबाट समाजवाद नाम हटाइदिनुहोस् म खुशी हुने छु। या शहरका ठाउँमा गाउँ राखिदिनुहोस् झन धन्य हुने छु।
(बजेटमाथिकाे छलफलमा भाग लिने क्रममा प्रतिनिधि सभाकाे बैठकमा व्यक्त विचार)
Prevपछिल्लोबिष्णु पौडेलको चुनौतिः बृद्धभत्ता बृद्धि गलत भन्ने हिम्मत छ कसैको?
अघिल्लोगणतन्त्रमा पनि बाहुबली श्रीपेचधारीले नै बजेट कुम्ल्याएः विराेध खतिवडाNext